बिहान चाडै उठ्दा स्वास्थ्यमा यस्ता फाइदा ! - VOICE OF NEPAL
बिहान चाडै उठ्दा स्वास्थ्यमा यस्ता फाइदा !
९ मंसिर २०७६, सोमबार १२:५५
211 ??? ???????
यो शोधको प्रकाशन ‘सोइकेट्रिक रिसर्च’ नामक पत्रिकामा गरिएको छ । यो शोध तयार पार्नका लागि क्रोनोटाइप (राती जाग्राम बस्नेहरु) का बीच सम्बन्ध पत्ता लगाउनका लागि ३२ हजार महिला नर्सको आँकडाको विश्लेषण गरिएको छ । यसमा २४ घण्टाको दौरान विशेष समयमा व्यक्तिको निन्द्राको प्रवृत्ति, सुत्ने–उठ्ने बानी र मनोविकार समावेश गरियो । वेटरले भने, ‘हाम्रो परिणामले क्रोनोटाइप र मानसिक रोगको जोखिमबीच मामूली सम्बन्ध देखाउँछ । यो क्रोनोटाइप र मनोदशासँग जोडिएको अनुवांसिक मार्गको ओभरल्यापसँग सम्बन्धित हुनसक्छ ।’
१. बिहान चाँडै उठ्दा तपाईंले सबैभन्दा शुद्ध हावा पाउनुहुन्छ जसले तपाईंको फोक्सो स्वस्थ रहन्छ । शुद्ध अक्सिजन शरिरलाई स्वस्थ राख्नका लागि आवश्यक छ ।
२. जो व्यक्ति बिहान चाँडै उठेर व्यायाम गर्दछन् उनीहरुलाई हृदय रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । शरिरमा रक्त संचार सही रहन्छ ।
३. बिहान चाँडै उठ्दा मानसिक रोगको समस्या हुँदैन । योगा र प्राणायम गर्दा मानसिक रोग हट्छ ।